प्रेमा शाह र पुरुषोत्तम बस्नेतको प्रेम | samakalinsahitya.com
त्यस बेला प्रेमा शाहले लेखेपछि आफ्ना रचना बस्नेतलाई देखाउने गर्थिन् । भनौँ बस्नेत प्रेमाका रचनाका प्रथम पाठक हुन्थे । त्यस बेलासम्ममा प्रेमाको साहसीपन, निर्भीकता र प्रतिभासँग पनि बस्नेत प्रभावित भइसकेका थिए । साथै प्रेमाको साहित्यिक व्यक्तित्वसँगसँगै उनको शारीरिक सौन्दर्यले पुरुषोत्तम बस्नेत पनि प्रेमाप्रति थप आकर्षित हुन थालिसकेका थिए । प्रेमा पनि बस्नेतको इमान, स्वच्छ मन र उच्च बौद्धिकताका साथै उनको शालीन व्यक्तित्वप्रति भुतुक्कै हुन थालेकी थिइन् ।
२०२१ सालको कुरा हो; राष्ट्रिय नाचघरमा एउटा साहित्यिक समारोह भएको थियो । त्यस समारोहमा प्रेमा शाहले ‘आऊ मलाई सम्भोग गर’ भन्ने कविता सुनाएकी थिइन् । अधिकांश महिलाहरू घुम्टोभित्रै बस्ने त्यस जमानामा एउटी युवतीले समारोहमा उच्च शिर राखेर सम्भोगका लागि आह्वान गर्नु भनेको चानचुने साहसको कुरा थिएन । यो कविता लिपिगत रूपमा कतै प्रकाशित भएन तर यसै कविताको भावलाई प्रेमाले रूपान्तरित गरेर अर्को वर्ष ‘मुकुट’ मासिकमा "एउटै सम्भोग" शीर्षकमा कथा प्रकाशित गराएकी थिइन् ।
प्रेमा शाह र पुरुषोत्तम बस्नेतबीचको प्रेमसम्बन्ध दिनहुँ बढोत्तरीको गतिमा अघिअघि बढिरहेको थियो । त्यसै समयमा बस्नेतले सेन्ट्रल होस्टेल छोडेका थिए । त्यसपछि उनी सिफलको डाँडामा अवस्थित आफ्नो निवासमा बसोवास गर्न थाले । त्यस बेला उनी जापानी १६१ सिसीको होन्डा मोटरसाइकलमा सवार हुन्थे । उनी पैतृक रूपबाटै सम्पन्न थिए । त्यसैले उनी आफ्नो इच्छाअनुसारको दामी सवारीसाधन चढ्ने गर्थे । त्यतिखेरसम्ममा काठमाडौँमा त्यसरी मोटरसाइकल चढ्ने मान्छे निकै खानदानी नै हुनुपर्थ्यो । कृष्णभक्त श्रेष्ठका अनुसार ‘पुरुषोत्तम बस्नेत भनेका धेरै नै धनी थिए । उनैका बुबाले तारिणीप्रसाद कोइरालालाई समेत मद्दत गरेका थिए । त्यतिखेर तारिणीकै घर चाबेलमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला पनि बस्थे । साथै बस्नेतका बुबाले कोइरालालगायत नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई पनि आर्थिक सहयोग गरिरहन्थे ।’
त्यस समय काठमाडौँ सहरमा मोटर र मोटरसाइकल फाट्टफुट्ट मात्रै कुद्थे । पुरुषोत्तम बस्नेतको उ. का. (उपत्यका अञ्चल कार्यालय) ११०५ नम्बरको गाडा रातो रङ्गको मोटरसाइकलमा प्रेमा शाह पछाडि बसेको देख्ता र सुन्दा केदारमान व्यथित, विजय मल्ल, पारिजात, कृष्णभक्त श्रेष्ठ, द्वारिका श्रेष्ठ र मदन रेग्मीहरूले प्रेमालाई भाग्यमानी युवती भन्थे । साथै प्रेमाजस्ती जल्दीबल्दी युवतीलाई लिएर हिँडेकोमा बस्नेतलाई हिम्मती, पुरुषार्थी र भाग्यमानी भन्नेहरू पनि थिए ।
पुरुषोत्तम बस्नेत र प्रेमा शाहको प्रेमप्रसङ्गको हल्लाले त्यस बेलाको साहित्यिक मञ्चहरू रङ्गिसकेका थिए । साहित्यिक सभा, समारोहमा जानेआउने सन्दर्भले उनीहरू एकअर्कामा मात्र होइन जनमाझ पनि प्रेमीप्रेमिकाको सुललित स्थानमा पुगिसकेका थिए । कृष्णभक्त श्रेष्ठका अनुसार ‘त्यस घडी प्रेमा र बस्नेत श्रीमान्–श्रीमतीजस्तै भएर हिँड्ने गर्थे ।’ वास्तवमा ईश्वरीय अनुकम्पा प्राप्त भएझैं एकअर्काका लागि जीवन बाँच्ने उनीहरूको अनुपम जोडी देखिन्थ्योे । त्यस बखत प्रेमा बस्नेतसँगको प्रेममा नै समर्पित थिइन् । त्यति खेर उनले बस्नेतकै माया, प्रेम र स्नेहमा आबद्ध कविता पनि लेखिन्;
काफलझैंँ तिम्रा नीला आँखा
अन्तर यो पुतलीको पखेटाझैँं
सिपीझैंँ तैरिरहन खोज्छन् ।
आहा ! तर, विशद यी कामनामा
पुरुषोत्तम बस्नेत पुग्ने समयमा राणागृहमा प्रायः मानिस हुँदैनथे । जसले गर्दा प्रेमा शाह र बस्नेतका लागि त्यस घरमा पर्याप्त प्रेमिल वातावरण हुने गर्थ्यो । तर पछिपछि राणापरिवारको निकै खप्की खानुपरेकाले प्रेमाले बस्नेतलाई राणागृहमा नआउन नै अनुरोध गर्न थालेकी थिइन् । एउटी शुद्ध ठकुरी र अर्का पक्का क्षत्री परिवारका भएका कारण कतिपय व्यवहारमा यिनीहरूको सहयात्रा अत्यन्तै अप्ठ्यारो किसिमको थियो ।
दिनभरि, दिनभरि सँगसँगै समय बिताउँदा पनि प्रेमा शाहका मनमा पुरुषोत्तम बस्नेतप्रतिको र बस्नेतका हृदयमा प्रेमाप्रतिको प्रेमको फोहरा बहिरहेकै हुन्थ्यो । ती फोहोरा समेटेर प्रेमाले बस्नेतलाई धेरै चिठी लेखेकी थिइन् र बस्नेतले पनि प्रेमालाई त्यसै गरेका थिए । मौखिक बोलीचालीमा प्रेमा पुरुषोत्तमलाई ‘डियर बस्नेतजी’ नै भन्थिन् भने बस्नेत चाहिँ ‘प्रेमा’ नै भन्थे । अनि प्रेमाको बस्नेतउपरको चिठी ‘डियर बस्नेत’ बाट सुरु हुन्थ्यो । उनले बस्नेतलाई लेखेका चिठी ‘तिम्री प्रेमा’ मा पुगेर समाप्त हुन्थ्यो । कविताभन्दा गद्याख्यानमा प्रबल प्रेमाको लेखनका चिठी पढ्दा बस्नेत समय बितेको पनि पत्तो पाउँदैनथे । तर दुर्भाग्य ! बस्नेतका ती अमूल्य प्रेमपत्रहरूलगायत बीपी कोइराला, धरणीधर कोइरालाले उनलाई लेखेका चिठीपत्रहरूसमेत खानतलासीका क्रममा २०२७ सालमा नै पुलिसले जफत गरेको थियो ।
सुरुमा प्रेमप्रसङ्ग चलिरहेका बेला प्रेमा शाह र पुरुषोत्तम बस्नेत उन्नाईस, बीस वर्षका थिए । त्यो क्रम झाँङ्गिँदै गएपछि उनीहरू भविष्यमा वैवाहिक जीवनमा बाँधिने बलियो योजना बुन्ने क्रममा अघि बढिरहेका थिए । त्यसो त विज्ञानशमशेरलगायत राणाका परिवारजनलाई आफ्नी नातिनी अथवा भान्जीले विवाहित अनि क्षत्रीको छोराको दौराको फेर समातेको मन परेकै थिएन । त्यसैले उनीहरू प्रेमालाई बस्नेतसँग सङ्गत नगर्नका लागि घरीघरी सल्लाह दिने गर्थे । तर प्रेमा आफ्नो तनमनमा बसिसकेका बस्नेतबाट टाढा नजाने निर्णयमा नै थिइन् ।
बस्नेतसँगको प्रेममा प्रेमा डुबेताका एक पटक राणागृहमा बस्नेतविरोधी खुबै ठूलो रँडाकोसमेत मच्चिएको थियो । त्यस घडी बस्नेतका विरुद्धमा दमनशमशेर राणाले आगो ओकलेका थिए (राणा भारतका लागि राजदूत पनि भइकेका थिए) । आफ्ना प्रेमीका विरुद्ध दन्केका दमनमाथि प्रेमाले पेस्तोलसमेत उठाएकी थिइन् । भनौँ यिनले एक चोटि हातमा पेस्तोल बोकेर आफ्ना जिजुबुबा विज्ञानशमशेर राणाका दाजु दमनशमशेरलाई हान्न पनि गएकी थिइन् । तर उनलाई अरूले छुट्ट्याएर गोली लाग्नबाट दमनशमशेरलाई बचाएका थिए । त्यसैले यिनका मामा वरुणशमशेर राणाले यिनलाई कम्युनिस्ट पनि भन्ने गर्थे । प्रेमाका जिजुबुबा विज्ञानशमशेर राणाले चाहिँ प्रायः यिनलाई कम्युनिस्ट नै भनिरहे ।
पुरुषोत्तम बस्नेतका नाउँको वारेन्टका साथसाथै बस्नेतका सम्भावित अड्डाहरूमा पनि पुलिसले खोजी गर्यो । यसै क्रममा विज्ञानशमशेर राणाका घरमा पनि पुलिसले बस्नेत त्यहीँ होलान् भनेर खानतलासी गर्यो । अनाहकमा आफ्ना घरमा पुलिसको खानतलासीका कारणले राणापरिवार बस्नेतको झनै खुलेर विरोधमा लाग्न थाले । प्रेमालाई उनको परिवारले बस्नेतसँगको प्रेम परित्याग गर्न र उच्च घरानियाँ राणा र ठकुरीसँग नै विवाह गर्न चारैतिरबाट दबाब दिन थाले ।
राज्य विपरीत भूमिगत मान्छे उच्च स्थानमा उक्लिने कुरामा प्रेमा शाहलाई नै पनि त्यति सारो आफ्नो आत्मविश्वासले साथ दिएको थिएन । यसैबीच पुरुषोत्तम बस्नेत विवाहित पुरुष हुन् भन्ने कुरा पनि राणा परिवारले निकै जोडतोडले प्रेमाउपर बराबर व्याख्या गरेका थिए । राष्ट्रको संविधानविपरीत राजनीति गर्ने र त्यसमाथि विवाहित पुरुषसँग विवाह गर्नुको औचित्यहीनताप्रति पनि प्रेमा क्रमशः सचेत हुन थालेकी थिइन् । त्यसो त बस्नेतले प्रेमालाई आफूले इच्छा नगरेकै बेला बाल्यावस्थामा गरिएको आफ्नो विवाहप्रति कहिल्यै कुनै चासो नराखेको कुरा व्यक्त गरिसकेका थिए । बस्नेतको इमानलाई सुरुसुरुमा प्रेमाले पनि मनमा गाँठो त पारेकै थिइन् । यति हुँदाहुँदै पनि घरपरिवारको बस्नेतउपरको एकोहोरो विरोध र भूमिगत बस्नेतसँग त्यस बखतको सम्बन्धहीनताका कारण प्रेमाले बस्नेतको प्रेमलाई एक्कासी परित्याग गर्ने आँटसमेत गरिदिइन् । उनकी दिदी शशी राणा र वरुणशमशेर राणाकी पत्नी कनकराज्यलक्ष्मी राणा अथवा भनौँ उनकी माइजूको ललाईफकाईमा परेर प्रेमा बस्नेतसँग टाढिने क्रममा नै उभिइन् । त्यस बखत प्रेमाको वरिपरि बसेर घरपरिवारका मान्छेबाट प्रेमालाई भनिरहने गरिन्थ्यो— ‘सरकारका विरोधमा लागेर राजनीति गर्ने मान्छे अब यस दुनियाँमा कहिल्यै पनि उक्सिन सक्दैनन् । यसरी ओरालो लागेको मान्छेसँग आँखा फुटेकाले मात्र विवाह गर्छन् । त्यस्ता मान्छेसँग विवाह गरेर कसैले पनि कहिल्यै सुक्ख पाउँदैनन् । त्यस्ता सरकारद्रोहीसँग विवाह गर्नेले सधैँ रोएरै बस्नुपर्छ ।’ साथै प्रेमाकी दिदीद्वारा आकाश पातालको उपमाले सिँगारिएका भारतीय धनाढ्य जानवीप्रताप शाहीको नाउँ मात्र प्रेमाका अगाडि उभ्याइने गरिन्थ्यो । त्यस बेला उनलाई कति बाध्य पारियो भने यसबारे अरू विकल्प सोच्ने उनले मौका नै पाइनन् । अन्ततः प्रेमाको विवाह हुने निश्चित नै भयो । अनि प्रेमालाई भारतमै लगेर शाहीसँग लगनगाँठो कस्न लगाइएको थियो । यसरी नै बस्नेतको प्रेमको महल प्रेमाका तर्फबाट खण्डहरमा रूपान्तरित गरिएको थियो ।
प्रेमा शाह भारतीय जानवीप्रताप शाहीकी पत्नी भएकोमा राणापरिवारले हर्षबढाइँ गरेको थियो । त्यसै उमङ्गका बेला प्रेमाका मामा वरुणशमशेर राणाले पुरुषोत्तम बस्नेतका घनिष्ट मित्र कृष्णभक्त श्रेष्ठलाई मुख लोपारेको हात देखाउँदै भनेका थिए— “ला... ! हाहाहा... ! मैले मेरी भान्जीलाई जोगाएँ कि जोगाइनँ ? तिम्रो साथीले मेरी भान्जीलाई विवाह गर्न सक्यो त ! तिमीहरू अब फेरि फुटानी हाँक्छौ ?” त्यस बेला राणा गोरखापत्र संस्थानको मुखपत्र ‘द राइजिङ नेपाल’ दैनिकका सम्पादक र श्रेष्ठचाहिँ सोही पत्रिकाका उपसम्पादक थिए । श्रेष्ठ पछि ‘गोरखापत्र’ दैनिकका सम्पादक र गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक भएका थिए ।
२०४८ सालको कुरा हो; पुरुषोत्तम बस्नेत गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष थिए । अनि वरुणशमशेर राणाचाहिँ उनैका मातहतमा काम गर्थे । अथवा भनौँ त्यस समय राणा गोरखापत्र संस्थानको अङ्ग्रेजी साप्ताहिक ‘सन्डे डिस्प्याच’ का सम्पादक थिए (त्यो पत्रिका धेरै चलेन पनि) । त्यस बेलाचाहिँ बस्नेतसँग आज्ञापालक भई राणाले आफ्नो पदीय कार्य निर्वाह गरेका थिए । उनीहरूमाझ संस्था र पत्रिकाबारे विचारविमर्श पनि भइरहने गर्थ्यो । मानौँ पहिलाका सबै घटना र चोटबाट दुवै जना अनविज्ञझैँ देखिन्थे ।
२०२७ सालको कुरा हो; भूमिगत अवस्थाबाट नै पुरुषोत्तम बस्नेत पक्राउ परेका थिए । त्यतिखेर सत्तासित नजिक भएका राणापरिवारले नै बस्नेतलाई जेल हाल्ने कडी अपनाएका थिए । त्यसपछि बस्नेत जेलमा कोचिएका थिए । राजनीतिज्ञ बस्नेत मुटुभित्र प्रेमा शाहको प्रेमदहमा डुबेका भए पनि भौतिक रूपमा आफ्नी प्रियसीबाट टाढा भइरहे । जेल परेको केही वर्षपछि नै उनी जेलबाट बाहिरिएका थिए । त्यस समय उनले आफूलाई जिन्दगीबाटै थाकेको महसुस गरे । तर पनि उनले बिस्तारै खुट्टा टेक्न थाले । अनि प्रेमासँगको प्रेमसम्बन्ध असफल भएपछि बस्नेतले कसैसँग प्रेम गरेनन् । प्रेमासँगको प्रेम नै उनको पहिलो प्रेम थियो र प्रेमासँगकै उनको प्रेम अन्तिम प्रेम पनि थियो ।
पुरुषोत्तम बस्नेत प्रेमा शाहसँगको मायामा मात्र हुरुक्क थिएनन् । उनी प्रेमाको प्रतिभाउपर पनि अत्यन्तै प्रेम गर्थे । आफ्नी प्रियाको सिर्जनात्मक प्रतिभामा खिया नपरे हुन्थ्यो भन्ने उनको हरदम चाहना हुन्थ्यो । नइसँगको भेटघाटमा पनि बस्नेत बराबर दोहोर्याएर भन्ने गर्थे— “पछिल्ला समयमा प्रेमाले लेख्नै छाडिन् । उनले लेखिरहनुपर्थ्यो ।”
प्रेमा शाहको पहिलो विवाह असफल भएको अथवा विवाहित पुरुषले नै झुक्याएर प्रेमालाई बिहे गरेको कुरा सुनेर पुरुषोत्तम बस्नेत रमाउन सकेनन् । विवाहितका साथसाथै पर्याप्त सन्तानका पिता भइसकेका शाहीले भ्याक्सेटोमी गरेर प्रेमासँग विवाहको खेल खेलेको कुरा चाल पाएपछि प्रेमाले शाहीलाई त्यागेको समाचार पनि बस्नेतसमक्ष पुगेको थियो । आफूले अतिशय प्रेम गरेकी प्रेमाले पटकपटक पुरुषहरूबाट धोका पाएको कुरा मात्र सुनिरहँदा बस्नेतको मन कुँडिइरहन्थ्यो । शाहीसँगको वैवाहिक जीवन असफल भएपछि पनि विजय मल्लले पुनः बस्नेतसँग प्रेमाको मिलन गराउन खोजेका थिए । तर प्रेमाले विजय मल्लको उक्त प्रस्ताव अस्विकार गरेकी थिइन् ।
शाहीसँगको विवाह भङ्ग भएपछि प्रेमा शाहले रमेश कर्माचार्यसँग विवाह गरेको कुरा पनि पुरुषोत्तम बस्नेतले जानकारी पाएका थिए । जे गरी भए पनि प्रेमाले सुख पाएको खबर सुन्न बस्नेत सधैं लालयित रहन्थे ।
२०४२ सालको कुरा हो; पुरुषोत्तम बस्नेत न्युरोडको पीपलबोटमुन्तिर आफ्नो जुत्तामा पालिस गराउँदै थिए । त्यसै बेला प्रेमा शाह कतैबाट त्यहीँ आइपुगेकी थिइन् । उनले मोचीलाई आफूले लगाइरहेको छालाको चप्पल सिलाइदिन अनुरोध गरेकी थिइन् । मोचीले चप्पल समाएर ओल्टाईपल्टाई हेरेपछि ‘यो चप्पल त सिलाउन सकिँदैन’ भन्ने प्रेमालाई जबाफ दिएको थियो । प्रेमाले लगाइरहेको चप्पल वास्तवमै निकै थोत्रो भइसकेको थियो । प्रेमाको त्यस्तो अवस्था देखेर बस्नेतलाई प्रेमाप्रति करुणा जागेको थियो । ‘त्यहीँ पर यो चप्पल सिलाउने ठाउँ मैले देखेको छु, जाऊँ न !’ बस्नेतको आग्रह प्रेमाले सुनिन् । वास्तवमा त्यस ठाउँमा बस्नेत र उनका साथीहरू पनि उभिएका छन् भन्ने उनले चाल पाएकै थिइनन् । बस्नेतले प्रेमालाई जुत्ता पसलमा पुर्याएर नयाँ चप्पल किनिदिने अभिप्रायले ती संवाद पोखेका थिए । तर प्रेमाले बस्नेतको अनुरोधलाई ठाडै अस्वीकार गरेकी थिइन् । दुवै जनाको सामान्य औपचारिक कुरापछि प्रेमा थोत्रो चप्पल घिसार्दै बस्नेतबाट बिदा भएकी थिइन् । यसै सन्दर्भमा ईश्वरवल्लभले पछिसम्म पनि भनिरहे— “प्रेमा शाहजस्ती स्रष्टाको दयनीय आर्थिक अवस्था देख्दा जीवनदेखि नै वितृष्णा लागेर आउने गर्छ ।” त्यतिखेरसम्ममा प्रेमा शाह गतिलो लुगा लगाउने हैसियतबाट पनि टाढा पुगिसकेकी थिइन् ।
प्रेमा शाहले अलि गतिलो मानिससँग विवाह गरेर राम्रोसँग बसेकी भए हुन्थ्यो भन्ने पुरुषोत्तम बस्नेतलाई लाग्थ्यो । आफूले भुतुक्क भएर प्रेम गरेकी स्त्रीले फेरि घरीघरी दुक्ख पाएको सुन्नु र हेर्नुपर्दा बस्नेतलाई कहिल्यै रमाइलो लागेको थिएन ।
प्रेमा शाहकी छोरी जल नेपाली सिनेमामा माथिल्लो कोटीकी नायिका भएको समाचारले पुरुषोत्तम बस्नेतलाई निकै खुसी दिएको थियो । बस्नेतले जललाई हेर्नकै लागि पनि जल शाह अभिनित सिनेमा हेरेर खुसी भएका थिए ।
२०५९ सालमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले पार्टी कार्यालयमा तत्कालीन राजनीतिक वातावरणका बारेमा चर्चा गर्नका लागि सिनेकलाकारहरूको जमघट गराएको थियो । सोही कलाकारहरूको समूहमा जल शाह पनि पार्टी कार्यालयमा पुगेकी थिइन् । त्यस बेला ‘प्रेमालाई दिनू’ भनेर आफ्नो भिजिटिङ कार्ड जललाई दिने इच्छा पुरुषोत्तम बस्नेतलाई भएको थियो । तर ‘प्रेमाले कस्तो ठान्लिन् र जलले के सोच्लिन्’ भनेर बस्नेतले त्यो कार्ड दिन सकेका थिएनन् । त्यस बेला उनले जल शाहलाई चाहिं एकोहोरो हेरिरहेका थिए ।
‘मैले भारतीयसँग हतार गरेर विवाह गर्नु नै गलत गरेकी रहेछु, मलाई बस्नेतजीले कति माया गर्थे’ भन्ने कुरा प्रेमा शाहले केही आफन्त र विजय मल्ल, ईश्वरवल्लभ, ध्रुवचन्द्र गौतम, हरिभक्त कटुवाल आदिसँग भनेकी पनि रहिछन् । विजय मल्लले प्रेमाको यस्ता विचारकै फेरो समातेर प्रेमालाई पुनः पुरुषोत्तम बस्नेतसँगै जीवन गाँस्ने सल्लाह दिएका थिए । जुन कुरा प्रेमाले फेरि पनि अस्वीकार गरेकी थिइन् । ‘तपाईंको र प्रेमाको सम्बन्ध लभ एन्ड हेटको रहेछ ।’ प्रेमा र बस्नेतको समग्र पहिचान गरेका मल्लले कुनै बेला बस्नेतसँग यी संवाद अभिव्यक्त गरेका थिए । ‘तर मैले त सधैँ प्रेमासँग प्रेम मात्र गरेँ, मैले उनलाई कहिल्यै घृणा गरिनँ’ भन्ने शब्दको आडमा बस्नेतले भने प्रेमाको प्रेमको पुजारी भएर नै एकल जीवन व्यतित गरे । प्रेमाको निधनपछि पनि बस्नेतको अवस्था प्रेमाकै सेरोफेरोको मायामा बाँधिएको मात्र देखियो । यसै प्रसङ्गमा इन्दिरा प्रसाईले भनिन्— “पुरुषोत्तम बस्नेतजस्ता शिष्ट, मर्यादित र समर्पित प्रेमीे आजसम्म मैले देखेकै थिइनँ ।”
© नरेन्द्रराज प्रसाईकृत ‘विद्रोही प्राज्ञ : प्रेमा शाह’ नामक जीवनी कृति २०७५ को एउटा पाठ